Yaaliin humnooni motumaa Miseensoota &#96;&#96;Koree sochii gaaffii eenyummaa uummata Walqaayit&#96 });
Yaaliin humnooni motumaa Miseensoota &#96;&#96;Koree sochii gaaffii eenyummaa uummata Walqaayit&#96
Edaa halkaan, afoo lafaa barii Gareen fuula isaanii aguuganii fi Yuniformii Fedeeraalaa uuffatan manneen namootaatti bobba’uu isaanitin miseensota korree kessaa namoota afuur butanii jirru.Miseensi koree kanaa nama shanaffaa ta`uun isaa kan himamuuf Koloneel Dammaqaa Zewdee manni isaanii marfamee boombiin sadii fi Mortaara darbatameen manni isaanii jalaa diigamu ibsamee jira. Ijoollee isaanii fi haadha warraa waliin manicha keessa akka jiraniis ibsamee jira.Koloneel Dammaqeen akkuma hidhateetti humnootii nageenyaan marfamee mana isaa keessa jira jedhu. Yeroo amma kanattiis Darbee darbees dhukaasii nanoo mana Koloneel Dammaqaatii dhagahama jirra jedhuu. Hojii kana gaggeessaa kan jiruus polisii Federaalaa ta’uunis himama jirra .
Birmanaa umanii miseensota koreetiif godheen yeroo kanatti lollii umataa fi warrana motuma gidutii ta`aa jirraa.Halaa walfakatuun umanii lokofsaan gudaa ta`e walqaayit irraa Kolonel Dammaqa Zewud humnaa motuma irraa gachisisuuf garra magalaa Gondar socha`aa akka jirru dhaga`ama jirra.
Waraanni Motuma dabalataa Gondar kaabaa fi iddoo biraatii dabalama jirra.Dargaggoota magaalaa Gondar keessaa 3 ajjefamuu fi 4 rasaasaan mad’aan ta’uu dubbi himaan koree kanaa ibsanii jiru.
Ministeera waajiira dhimmootii komunikeshinii mootummaa Federaala Itiyoophiyaa Obbo Getaachoo Raddaa magaalaa Gondar keessatti walitti bu’insii akka ture, kunis namoota gocha farra nagaa irratti bobba’an hanga tokko to’annaa seeraa jala oolchuuf sochii godhame ta’uu ibsan. Jarreen kun to’annaa seeraa jala hin gallu jechuun qondaaltoota polisii irratti ajjechaa gaggeessan jedhan. Haallii uumamees kana waliin wal qabata jedhan